Agaasimaha guud ee Wasaaradda waxbarashada oo Kormeeray ku tagay Dugsiyada waxbarashada – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Agaasimaha guud ee Wasaaradda waxbarashada oo Kormeeray ku tagay Dugsiyada waxbarashada
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare e XFS ,Xasan Maxamed Cali ayaa manta kormeer ku tagay 24 iskuul oo ay dhawaan lasoo wareegtay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya .
Shaqaalaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa saaka loo kala diray iskuullada dowladda si ay u soo ogadaan habka uu u shaqeyo manhajka waxbarashada oo ay dhawaan diyaarisay wasaaradda waxbarshada.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xasan Maxamed Cali ayaa sheegay in kormeerka maanta uu salka ku hayay sidii loo ogaan lahaa sida ay u socoto waxbarashada iskuullada dowladda iyo manhajka cusub.
“Kormeerka maanta wuxuu salka ku haya sidii loo ogaan lahaa qaabka ay u socoto waxbarashada iskuullada dowladda, tirada macalimiinta soo xaadirta in lasoo hubiyo iyo in la ogaado manhajka buugaagtii wasaarada ay bixisay in ardaydu isticmaalaan kormeerka saakay waxa uu ahaa mid dhameystiran, wasaaradda waxbarashada waxa ay diyaarisay wax yaabahii looga baahnaa in lagu sameeyo kormeer iyo agabkii lagu qaban lahaa kormeerka”ayuu yiri agaasimaha wasaaradda waxbarashada.
Wasaaradda waxbarshadda xukuumadda soomaliya ayaa dadaal ugu jirto horamarinta waxbarashada dalka iyo la xisaabtanka macalimiinta iyo maamulasha iskuullada dowladda.